DigitalTimes.com.mm – Page 358 – Science, Technology, Gadget, Electronics
တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ လူတစ်ယောက်က ဘက်ထရီကိုသွားနဲ့ကိုက်ပြီး စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာပဲ ပေါက်ကွဲမှုအသေးစားလေးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဆိုင်ရဲ့ စီစီတီဗွီကင်မရာမှာရိုက်ကူးမိထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ဝဘ်ဆိုဒ်မှာတင်ခဲ့ပြီး ကြည့်ရှုသူပေါင်း ၄.၆၉ သန်းတောင် ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ Taiwan News ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ရက်နေ့မှာ လူတစ်ယောက်က…
ဘယ်သူမှတော့ ကိုယ့်ဖုန်းကို နှေးစေချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှ နှေးလာတာ၊ storage နေရာသိပ်မကျန်တာ၊ bugs တွေစသဖြင့် အမျိုးစုံအောင်ဖြစ်လာတာပါပဲ။ ဒီတော့ ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ performance ကိုမြန်အောင်လုပ်လို့ရမယ့် အချက်ကလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁. မသုံးတဲ့…
ရှောင်မီရဲ့ ပူးတွဲတည်ထောင်သူနဲ့ ဒုတိယ ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ ဟုန်ဖန်းက ဘေဂျင်းမှာ ကျင်းပတဲ့ ပွဲတစ်ခုမှာ ကုမ္ပဏီဟာ MIUI 10 ကို စတင် ဖန်တီးနေပြီလို့ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ သူက MIUI 10…
LG က မြန်မာငွေ ၈ သောင်းကျပ်လောက်သာရှိတဲ့ စမတ်ဖုန်း အသစ်တစ်လုံးကို ရောင်းချပေးလိုက်ပါတယ်။ အရစ်ကျဝယ်ယူရင် ကနဦးပေးငွေကို ဒေါ်လာအားဖြင့် ၆၀ သတ်မှတ်ထားပြီး အမေရိကန်မှာ MetroPCS ကနေ ရောင်းချပေးလိုက်ပါတယ်။ အလွတ်ဝယ်ယူရင် ၁၃၉…
Apple ဟာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဖုန်းအသစ်များကို ရောင်းချပေးတာနဲ့ ဖုန်းအဟောင်းများကို ဈေးလျှော့ရောင်းချပေးလေ့ရှိပါတယ်။ အခုတော့ ဒီအစဉ်အလာကို ရပ်နားတော့မယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ Apple အရေး ကျွမ်းကျင်တဲ့ KGI Securities မှ Ming-Chi Kuo…
Thoe Gyi - Oct 14, 2016
IT လို့ အလွယ်ခေါ်တဲ့ Information Technogly ခေတ်ကြီးထဲမှာ နည်းပညာအသစ်အဆန်းတွေ တိုးတက် ထွန်းကားလာတဲ့အလျောက် လူသားတွေအနေနဲ့ ၄င်းတို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝတွေကို နည်းပညာ ပစ္စည်းတွေ အသုံးမပြုဘဲ နေထိုင်ဖြတ်သန်းဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါပြီ။ နည်းပညာပစ္စည်းတွေကို အသုံးများလာနဲ့ အမျှ နည်းပညာအကြောင်းကို နှံ့နှံ့စပ်စပ် သိချင်တဲ့သူတွေလည်းများပြားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။…
Day in Tech History, Gaming, Knowledge
အမေရိကန် ဂိမ်းထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Atari ကုမ္ပဏီဟာ ၁၉၇၇ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၄ရက်နေ့မှာ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ဗီဒီယိုကွန်ပျူတာဂိမ်းစနစ်လို့ လူသိများတဲ့ (Atari 2600 ဂိမ်းစက်ကို စတင်ထုတ်လုပ် ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ Atari 2600 ဒါမှမဟုတ် Atari VCS ဆိုတာဟာ အိမ်ဆော့ဗီဒီယို ဂိမ်းစက်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး…
Ye Wint - Oct 14, 2016
Mark Zuckerberg ဟာ သူ့အိမ်တွင်းမှာသုံးဖို့အတွက် ‘Iron Man’ ဇာတ်ကားထဲက Tony Stark ရဲ့ ‘J.A.R.V.I.S’ လိုမျိုး AI စနစ်တစ်ခု တည်ဆောက်နေကြောင်း ယခုနှစ်အစောပိုင်းမှာ လူသိရှင်ကြားဖွင့်ဟခဲ့ဖူးပါတယ်။ ယခုအခါမှာတော့ Mark Zuckerberg ဟာ ‘J.A.R.V.I.S’ အတိုင်း…
TrueMoney Transfer စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့
Ascend Groups ရဲ့ လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ TrueMoney မှ ထူးခြားဆန်းသစ်ပြီး စိတ်ချယုံကြည်ရသော ၀န်ဆောင်မှု၊ အချိန်ကိုက်ငွေလွှဲပြောင်းပေးနိုင်သောနည်းလမ်း TrueMoney Transfer စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲကို အောက်တိုဘာ (၁၃) ရက်နေ့ ညနေ့ (၃:၃၀) အချိန်က ရန်ကုန်မြို့ရှိ Kandawgyi Palace Hotel…
Facebook ဗီဒီယိုတွေကို တီဗီမှာ stream လွှင့်ပြီး ကြည့်နိုင်ပြီ
Facebook ပေါ်က ဗီဒီယိုတွေကို ဖုန်းစခရင်သေးသေးလေးမှာ ကြည့်ရတာ အားမရသူတွေအနေနဲ့ နောက်ဆို အိမ်ကတီဗီနဲ့တင် Facebook ဗီဒီယိုမျိုးစုံကို ကြည့်နိုင်တော့မှာပါ။ ဆိုရှယ်နက်ဝေ့ါခ် Facebook ဟာ ယနေ့ကစတင်ပြီးတော့ စမတ်ဖုန်းပေါ်ကဗီဒီယိုတွေကို Apple TV နဲ့ Chromecast တို့ကို stream လွှင့်နိုင်အောင်…
Android ဖုန်းစခရင်ကို လက်ဗွေရာဆန်ဆာသုံးပြီး ဘယ်လိုပိတ်မလဲ
Ye Wint - Oct 13, 2016
ယခုအသစ်ထွက်လာတဲ့ မော်ဒယ်မြင့်/လတ် ဖုန်းတော်တော်များများမှာ မပါမဖြစ်ပါလာတဲ့အရာတစ်ခုက Fingerprint scanner ဖြစ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးနည်းဖုန်းတစ်ချို့မှာပါ လက်ဗွေရာဆန်ဆာပါဝင်လာပြီဆိုတော့ ဖုန်းကို unlock လုပ်ရတာ အရင်ထက် အများကြီးပိုမြန်ဆန်လွယ်ကူလာသလို၊ လုံခြုံရေးပိုင်းမှာလည်း စိတ်ချမှုပိုရှိလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ဗွေရာဆန်ဆာပါဖုန်းအများစုမှာ လက်ဗွေရာနဲ့ စခရင်ကို unlock သာ လုပ်လို့ရပြီး၊…
Apple, Day in Tech History, HUBS
၁၉၈၈ခုနှစ်ရဲ့ ဒီနေ့မှာ Steve Jobs ဟာ NeXT ကွန်ပျူတာတွေကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်
၁၉၈၈ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၃ရက်နေ့မှာ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာ ရှိတဲ့ Davies Symphony Hall မှာ Steve Jobs ဟာ Motorola 68030 microprocessor ပါဝင်တဲ့ NeXT ကွန်ပျူတာကို မိတ်ဆက်ပြသခဲ့ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာကို Optical Storage…
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် ရှီးဗားနင်းပညာသင်ဆု လျှောက်ထားနိုင်
zayarsan - Oct 13, 2016
ယခုလာမယ့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် Chevening Scholarships Programme (ရှီးဗနင်းပညာသင်ဆု) လျှောက်လွှာတွေကို ခေါ်ယူလျက် ရှိပြီး အဲဒီအထဲကမှ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ပညာသင်ဆုတစ်ခုကတော့ ရှီးဗားနင်း ပညာသင်ဆုဖြစ်တယ် လို့ သိရပါတယ်။ . ရှီးဗားနင်း ပညာသင်ဆုဟာ အင်္ဂလန်နဲ့ ဗြိတိန် ဓနသယာယနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့…
Facebook, Google, HUBS
Google နဲ့ Facebook တို့ဟာ သူတို့ရဲ့ ချိတ်ဆက်မှုကို အရှိန်မြှင့်တင်တဲ့အနေနဲ့ ဟောင်ကောင်ကို ဆက်သွယ်ဖို့အတွက် ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ သတင်းတစ်ရပ်အရ အင်တာနက်ဘီလူးကြီး နှစ်ယောက်တို့ဟာ Pacific Light Data Communications Company, TE SubCom တို့နဲ့…
1 … 356 357 358 359 360 … 514
213 shares119 views
Microsoft က ဒေါ်လာ ၂၀၀ တန် တန်ဖိုးနည်း Windows 10 Laptop ကို မိတ်ဆက်